တိုက်ကြီး ငလျင်အပြီး မြေအောက် မှ ​အလွန်ထူးဆန်းသော ရွှေဥ ဥတဲ့ ရွှေပုတ်​သင်​ တစ်​​ကောင်​​တွေ့ရှိ ...! - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / တိုက်ကြီး ငလျင်အပြီး မြေအောက် မှ ​အလွန်ထူးဆန်းသော ရွှေဥ ဥတဲ့ ရွှေပုတ်​သင်​ တစ်​​ကောင်​​တွေ့ရှိ ...!
တိုက်ကြီး ငလျင်အပြီး မြေအောက် မှ ​အလွန်ထူးဆန်းသော ရွှေဥ ဥတဲ့ ရွှေပုတ်​သင်​ တစ်​​ကောင်​​တွေ့ရှိ ...!
Apann Pyay 8:21 AM ထူးဆန်းထွေလာ , ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
အလွန်​ထူးဆန်း​​သော ​ရွှေဥ ဥ သည့်​ မြန်​မာ့ ဒဏ္ဏာရီလာ ​ရွှေပုတ်​သင်​ တစ်​​ကောင်​ ( ၁၃.၃.၂၀၁၇) ရက်​​နေ့ ငလျင်​လှုပ်​အပြီး ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး တိုက်​ကြီးမြို့နယ်​တွင်​​ ​မြေကြီး​အောက်​မှ ရုတ်​တရက်​ ​​ပေါ်ထွက်​လာခဲ့သည်​။အဆိုပါ သတင်းအတွက်​ Facebook Hot News Agency သတင်းဌာန သတင်း​ထောက်​ ကို​သောင်း​အေးမှ အဆို ပါ ​ရွှေပုတ်​သင်​အား​တွေ့ရှိခဲ့​သော တိုက်​ကြီးမြို့ခံ ကို​ကျော်​ထွန်း၏ ​နေအိမ်​တွင်​ ​ယ​နေ့ ​တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခဲ့ပါသည်​။ တိုက်ကြီး ငလျင်အပြီး ထူးဆန်းစွာ မြေအောက်မှ မြန်​မာ့ ဒဏ္ဏာရီလာ ​ရွှေပုတ်​သင်​ တစ်​​ကောင်​​တွေ့ရှိ ” မင်္ဂလာပါ ကို​ကျော်​ထွန်း​ရေ” ” ဟုတ်​ကဲ့.. မင်္ဂလာပါ ကို​သောင်း​အေး​ရေ” ” အကိုက ​ရွှေဥ ဥ တဲ့ မြန်​မာ့ ဒဏ္ဏာရီလာ ​ရွှေပုတ်​သင်​ကို ဘယ်​လို​တွေ့ခဲ့တာလဲဆိုတာရယ်​ ​ရွှေဥ ဥ မှန်းဘယ်​လိုသိ တာလည်း ဆိုတာရယ်​ ကို တစ်​ချက်​​လောက်​​ပြောပြ​ပေးပါ အကို
” ” ​အော်​..ဒီလို ညီ​လေးရ.. ငလျင်​လှုပ်​ပြီး ​နောက်​တစ်​ရက်​မှာ အကို့ ခြံထဲက တောင်​ပို့ကြီး အက်​ကွဲသွားတယ်​.. အဲ့ဒီ ​တောင်​ပို့ကြီးကို ​​နေ့တိုင်း အကို့မိန်းမက အ​မွှေးတိုင်​ထွန်းပြီး ပူ​ဇော်​​နေတာ​လေ.. အဲ့ဒီ​နေ့ ငလျင်​လည်း လှုပ်​ပြီး​ရော ​တောင်​ပို့အက်​ကွဲသွားပြီး ဒီ ​အ​ကောင်​​လေး ထွက်​လာတာပဲ..
စ​တွေ့တုန်းက​တော့ ​ရွှေ​ရောင်​နဲ့ဆို​တော့ မိန်းမက လဒ်​​ကောင်းတယ်​ဆိုပြီး ​မွေးထားတာ​ပေါ့ ညီရာ..”…။“အဲ့.. ​မွေးပြီး ​နောက်​တစ်​ရက်​ကစပြီး ခုလိုမြင်​တဲ့အတိုင်း ​ရွှေဥ​လေး​တွေ တစ်​ရင်​ကို တစ်​လုံး နှစ်​လုံး ဥ တယ်​ ညီရ.. အကိုတို့လည်းမသိဘူး.. သူ့​မွေးထားတဲ့ ခြင်းထဲကြည့်​မှ ​တွေ့တာ..”“အဲ့တာနဲ့ အကိုလည်း အကိုနဲ့ခင်​တဲ့ မြန်​မာ့အထူးတိုက်​ခိုက်​​ရေးနှင့်​ ကွန်​မန်​ဒိုတပ်​က ဗိုလ်​မှုး သားစစ်​ကို ဖုန်းဆက်​ပြီး ​အ​ကြောင်းကြားထားလိုက်​တယ်​.. ဒါမှသာ စိတ်​ချရမှာ​လေ..”“အခု​တော့ ဗိုလ်​မှုး သားစစ်​က သူ့တပည့်​ ကွန်​မန်​ဒို အ​ယောက်​ ၃၀ ကို ခြံထဲမှာ​အသင့်​အ​နေအထားနဲ့ လုံခြုံ​ရေးယူ​ပေးထားတယ်​.. အားလုံးက စိတ်​ချရပါတယ်​”“ဟုတ်​ အကို.. ​တွေ့တယ်​.. ကျွန်​​တော်​​တောင်​ သူတို့ကို​ပြောပြီး မနည်းခွင့်​​တောင်းလာတာပါ” ”
​နောက်​တစ်​ခုက ဒီ ဥ တဲ့​ရွှေက တစ်​ဥကို ဘယ်​​လောက်​အ​လေးချိန်​ရှိလဲအကို””
ဟာ.. ဒါက တစ်​ဥကို အ​လေးချိန်​မတူဘူး ညီရ.. အနည်းဆုံး​တော့ ၅ မူးသားပဲ… ၁၆ ပဲရည်​အပြည့်​​နော်​.. တကယ့်​ အရည်​အ​သွေး​ကောင်းတဲ့​ရွှေစင်​စစ်​စစ်​ပဲ ညီရ..” တိုက်ကြီး ငလျင်အပြီး ထူးဆန်းစွာ မြေအောက်မှ မြန်​မာ့ ဒဏ္ဏာရီလာ ​ရွှေပုတ်​သင်​ တစ်​​ကောင်​​တွေ့ရှိ ” အကို.. အဲ့တာဆို ဒီအ​ကောင်​​လေး​အ​ကြောင်း အကိုသိသ​လောက်​ ​ပြောပြ​ပေးပါလား”“အကိုသိသ​လောက်​က​တော့ ဒါ ဒဏ္ဏာရီ ထဲမှာရှိတယ်​ညီ​လေးရ.. ​ပုဂံ​ခေတ်​မှာ ဒါမျိုးတစ်​​ကောင်​ မိဖူး​သေးတယ်​လို့ စာထဲမှာဖတ်​ဖူးတယ်​. အဲ့ဒီတုန်းက ဘုရင့်​ဆီကိုဆက်​သမလို့ လမ်းမှာ ​သေသွားတာတဲ့ ညီရ.. ဒဏ္ဏာရီ လိုဖြစ်​​နေခဲ့တာ အခု​တော့ လက်​​တွေ့မြင်​ရပြီ​ပေါ့ ညီရာ”” ​အော်​.. ဟုတ်​အကို ထူးဆန်းလိုက်​တာဗျာ.. ဂုဏ်​ယူပါတယ်​.. ​နောက်​ဆုံးအ​နေနဲ့ အကို ဒီ​ရွှေပုတ်​သင်​ အ​ကောင်​​လေးကို ဘယ်​လိုလုပ်​ဖို့ ​စဉ်းစားထားလဲ ခင်​ဗျာ..”” ​လော​လောဆယ်​​တော့ ဂျပန်​နိုင်​ငံမှ သတ္တ​ဗေဒနှင့်​ ထူးဆန်း​ထွေလာ သတ္တ၀ါ ​လေ့လာ​ရေး တက္ကသိုလ်​က ပါ​မောက္ခ ​ဆရာမ ရင်​နွယ်​စိုးတို့ ​ဆောင်းနှင်းကိုတို့ နဲ့​တော့ ချိတ်ဆက်​ထားပါတယ်​.. မနက်​ဖြန်​ ​ရောက်​ပါလိမ့်​မယ်​.. အခြား ပြည်​တွင်းက ပညာရှင်​​တွေအားလုံးလည်း ​ဖိတ်​ကြားထားပါတယ်​.. မနက်​ဖြန်​ ဗိုလ်​မှုး သားစစ်​ တို့ ​အ​စောင့်​အ​ရှောက်​နဲ့ ဒီ​ရွှေပုတ်​သင်​ကို လုံခြုံစိတ်​ချရတဲ့​နေရာမှာ သု​တေသန လုပ်​ကြမှာဖြစ်​ပါတယ်​.. ပြီးရင်​​တော့ ​​နောက်​ပိုင်း ဆုံးဖြတ်​ချက်​ကို တရားဝင်​ ​ကြေငြာ​ပေးသွားမှာပါ”” ဟုတ်​.. အကို အခုလို.. ​ဖြေကြား​ပေးတာ ​ကျေးဇူးပါပဲ..
မြန်​မာ့ ထူးဆန်း​ထွေလာ ဒဏ္ဏာရီလာ ​ရွှေဥ ဥ တဲ့ ပုတ်​သင်​ကို ​တွေ့ရှိတဲ့အတွက်​ ဂုဏ်​ယူပါတယ် အကို..”” ​အေး .. ညီ​လေး.. အကိုတို့ကလည်း ဒီလို ထူးဆန်းတဲ့ ဒဏ္ဏာရီ လာ အ​ကောင်​မျိူးကို အများပြည်​သူကို ​ပြောပြခွင့်​ရတဲ့အတွက်​ ညီ​လေးတို့ Facebook Hot News Agency ကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​..”လက်​ရှိတွင်​ အဆိုပါ ​ရွှေပုတ်​သင်​အား တိုက်​ကြီးမြို့ရှိ ကို​ကျော်​ထွန်း၏ ​နေအိမ်​တွင်​ အထူးကွန်​မန်​ဒို ဗိုလ်​မှုး သားစစ်​မှ တာဝန်​ယူ ​စောင့်​​ရှောက်​လျက်​ရှိပြီး ပြင်​ပလူများ အ၀င်​မခံ​ကြောင်း Facebook Hot News Agency မှ သတင်းရရှိပါသည်​။PHOTOS များအတွက်​ ဗိုလ်​မှုး သားစစ်​ ကွန်​မန်​ဒို အထူးတပ်​ဖွဲ့နဲ့ ကို​ကျော်​ထွန်းနှင့် ​ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအား အထူး​​​​ကျေးဇူးတင်​ပါသည်​။
အလှနျ​ထူးဆနျး​​သော ​ရှဥေ ဥ သညျ့​ မွနျ​မာ့ ဒဏ်ဏာရီလာ ​ရှပေုတျ​သငျ​ တဈ​​ကောငျ​ ( ၁၃.၃.၂၀၁၇) ရကျ​​နေ့ ငလငျြ​လှုပျ​အပွီး ရနျ​ကုနျ​တိုငျး​ဒသေကွီး တိုကျ​ကွီးမွို့နယျ​တှငျ​​ ​မွကွေီး​အောကျ​မှ ရုတျ​တရကျ​ ​​ပျေါထှကျ​လာခဲ့သညျ​။အဆိုပါ သတငျးအတှကျ​ Facebook Hot News Agency သတငျးဌာန သတငျး​ထောကျ​ ကို​သောငျး​အေးမှ အဆို ပါ ​ရှပေုတျ​သငျ​အား​တှရှေိ့ခဲ့​သော တိုကျ​ကွီးမွို့ခံ ကို​ကြျော​ထှနျး၏ ​နအေိမျ​တှငျ​ ​ယ​နေ့ ​တှဆေုံ့​မေးမွနျးခဲ့ပါသညျ​။ တိုကျကွီး ငလငျြအပွီး ထူးဆနျးစှာ မွအေောကျမှ မွနျ​မာ့ ဒဏ်ဏာရီလာ ​ရှပေုတျ​သငျ​ တဈ​​ကောငျ​​တှရှေိ့ ” မင်ျဂလာပါ ကို​ကြျော​ထှနျး​ရေ” ” ဟုတျ​ကဲ့.. မင်ျဂလာပါ ကို​သောငျး​အေး​ရေ” ” အကိုက ​ရှဥေ ဥ တဲ့ မွနျ​မာ့ ဒဏ်ဏာရီလာ ​ရှပေုတျ​သငျ​ကို ဘယျ​လို​တှခေဲ့တာလဲဆိုတာရယျ​ ​ရှဥေ ဥ မှနျးဘယျ​လိုသိ တာလညျး ဆိုတာရယျ​ ကို တဈ​ခကျြ​​လောကျ​​ပွောပွ​ပေးပါ အကို
” ” ​အျော​..ဒီလို ညီ​လေးရ.. ငလငျြ​လှုပျ​ပွီး ​နောကျ​တဈ​ရကျ​မှာ အကို့ ခွံထဲက တောငျ​ပို့ကွီး အကျ​ကှဲသှားတယျ​.. အဲ့ဒီ ​တောငျ​ပို့ကွီးကို ​​နတေို့ငျး အကို့မိနျးမက အ​မှေးတိုငျ​ထှနျးပွီး ပူ​ဇျော​​နတော​လေ.. အဲ့ဒီ​နေ့ ငလငျြ​လညျး လှုပျ​ပွီး​ရော ​တောငျ​ပို့အကျ​ကှဲသှားပွီး ဒီ ​အ​ကောငျ​​လေး ထှကျ​လာတာပဲ..
စ​တှတေု့နျးက​တော့ ​ရှေ​ရောငျ​နဲ့ဆို​တော့ မိနျးမက လဒျ​​ကောငျးတယျ​ဆိုပွီး ​မှေးထားတာ​ပေါ့ ညီရာ..”…။“အဲ့.. ​မှေးပွီး ​နောကျ​တဈ​ရကျ​ကစပွီး ခုလိုမွငျ​တဲ့အတိုငျး ​ရှဥေ​လေး​တှေ တဈ​ရငျ​ကို တဈ​လုံး နှဈ​လုံး ဥ တယျ​ ညီရ.. အကိုတို့လညျးမသိဘူး.. သူ့​မှေးထားတဲ့ ခွငျးထဲကွညျ့​မှ ​တှတေ့ာ..”“အဲ့တာနဲ့ အကိုလညျး အကိုနဲ့ခငျ​တဲ့ မွနျ​မာ့အထူးတိုကျ​ခိုကျ​​ရေးနှငျ့​ ကှနျ​မနျ​ဒိုတပျ​က ဗိုလျ​မှုး သားစဈ​ကို ဖုနျးဆကျ​ပွီး ​အ​ကွောငျးကွားထားလိုကျ​တယျ​.. ဒါမှသာ စိတျ​ခရြမှာ​လေ..”“အခု​တော့ ဗိုလျ​မှုး သားစဈ​က သူ့တပညျ့​ ကှနျ​မနျ​ဒို အ​ယောကျ​ ၃၀ ကို ခွံထဲမှာ​အသငျ့​အ​နအေထားနဲ့ လုံခွုံ​ရေးယူ​ပေးထားတယျ​.. အားလုံးက စိတျ​ခရြပါတယျ​”“ဟုတျ​ အကို.. ​တှတေ့ယျ​.. ကြှနျ​​တျော​​တောငျ​ သူတို့ကို​ပွောပွီး မနညျးခှငျ့​​တောငျးလာတာပါ” ”
​နောကျ​တဈ​ခုက ဒီ ဥ တဲ့​ရှကေ တဈ​ဥကို ဘယျ​​လောကျ​အ​လေးခြိနျ​ရှိလဲအကို””
ဟာ.. ဒါက တဈ​ဥကို အ​လေးခြိနျ​မတူဘူး ညီရ.. အနညျးဆုံး​တော့ ၅ မူးသားပဲ… ၁၆ ပဲရညျ​အပွညျ့​​နျော​.. တကယျ့​ အရညျ​အ​သှေး​ကောငျးတဲ့​ရှစေငျ​စဈ​စဈ​ပဲ ညီရ..” တိုကျကွီး ငလငျြအပွီး ထူးဆနျးစှာ မွအေောကျမှ မွနျ​မာ့ ဒဏ်ဏာရီလာ ​ရှပေုတျ​သငျ​ တဈ​​ကောငျ​​တှရှေိ့ ” အကို.. အဲ့တာဆို ဒီအ​ကောငျ​​လေး​အ​ကွောငျး အကိုသိသ​လောကျ​ ​ပွောပွ​ပေးပါလား”“အကိုသိသ​လောကျ​က​တော့ ဒါ ဒဏ်ဏာရီ ထဲမှာရှိတယျ​ညီ​လေးရ.. ​ပုဂံ​ခတျေ​မှာ ဒါမြိုးတဈ​​ကောငျ​ မိဖူး​သေးတယျ​လို့ စာထဲမှာဖတျ​ဖူးတယျ​. အဲ့ဒီတုနျးက ဘုရငျ့​ဆီကိုဆကျ​သမလို့ လမျးမှာ ​သသှေားတာတဲ့ ညီရ.. ဒဏ်ဏာရီ လိုဖွဈ​​နခေဲ့တာ အခု​တော့ လကျ​​တှမွေ့ငျ​ရပွီ​ပေါ့ ညီရာ”” ​အျော​.. ဟုတျ​အကို ထူးဆနျးလိုကျ​တာဗြာ.. ဂုဏျ​ယူပါတယျ​.. ​နောကျ​ဆုံးအ​နနေဲ့ အကို ဒီ​ရှပေုတျ​သငျ​ အ​ကောငျ​​လေးကို ဘယျ​လိုလုပျ​ဖို့ ​စဉျးစားထားလဲ ခငျ​ဗြာ..”” ​လော​လောဆယျ​​တော့ ဂပြနျ​နိုငျ​ငံမှ သတ်တ​ဗဒေနှငျ့​ ထူးဆနျး​ထှလော သတ်တဝါ ​လလေ့ာ​ရေး တက်ကသိုလျ​က ပါ​မောက်ခ ​ဆရာမ ရငျ​နှယျ​စိုးတို့ ​ဆောငျးနှငျးကိုတို့ နဲ့​တော့ ခြိတျဆကျ​ထားပါတယျ​.. မနကျ​ဖွနျ​ ​ရောကျ​ပါလိမျ့​မယျ​.. အခွား ပွညျ​တှငျးက ပညာရှငျ​​တှအေားလုံးလညျး ​ဖိတျ​ကွားထားပါတယျ​.. မနကျ​ဖွနျ​ ဗိုလျ​မှုး သားစဈ​ တို့ ​အ​စောငျ့​အ​ရှောကျ​နဲ့ ဒီ​ရှပေုတျ​သငျ​ကို လုံခွုံစိတျ​ခရြတဲ့​နရောမှာ သု​တသေန လုပျ​ကွမှာဖွဈ​ပါတယျ​.. ပွီးရငျ​​တော့ ​​နောကျ​ပိုငျး ဆုံးဖွတျ​ခကျြ​ကို တရားဝငျ​ ​ကွငွော​ပေးသှားမှာပါ”” ဟုတျ​.. အကို အခုလို.. ​ဖွကွေား​ပေးတာ ​ကြေးဇူးပါပဲ..
မွနျ​မာ့ ထူးဆနျး​ထှလော ဒဏ်ဏာရီလာ ​ရှဥေ ဥ တဲ့ ပုတျ​သငျ​ကို ​တှရှေိ့တဲ့အတှကျ​ ဂုဏျ​ယူပါတယျ အကို..”” ​အေး .. ညီ​လေး.. အကိုတို့ကလညျး ဒီလို ထူးဆနျးတဲ့ ဒဏ်ဏာရီ လာ အ​ကောငျ​မြိူးကို အမြားပွညျ​သူကို ​ပွောပွခှငျ့​ရတဲ့အတှကျ​ ညီ​လေးတို့ Facebook Hot News Agency ကို ​ကြေးဇူးတငျ​ပါတယျ​..”လကျ​ရှိတှငျ​ အဆိုပါ ​ရှပေုတျ​သငျ​အား တိုကျ​ကွီးမွို့ရှိ ကို​ကြျော​ထှနျး၏ ​နအေိမျ​တှငျ​ အထူးကှနျ​မနျ​ဒို ဗိုလျ​မှုး သားစဈ​မှ တာဝနျ​ယူ ​စောငျ့​​ရှောကျ​လကျြ​ရှိပွီး ပွငျ​ပလူမြား အဝငျ​မခံ​ကွောငျး Facebook Hot News Agency မှ သတငျးရရှိပါသညျ​။PHOTOS မြားအတှကျ​ ဗိုလျ​မှုး သားစဈ​ ကှနျ​မနျ​ဒို အထူးတပျ​ဖှဲ့နဲ့ ကို​ကြျော​ထှနျးနှငျ့ ​ကြေးဇူးတငျထိုကျသူမြားအား အထူး​​​​ကြေးဇူးတငျ​ပါသညျ​။